iMazing: ny safidy tsara indrindra amin'ny iTunes | Vaovao IPhone
iTunes dia mamela antsika hitantana ny atiny rehetra amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch antsika tsy mila rindranasa hafa izahay hitantanana ny fitaovantsika. Ny olana anananao dia ny fiezahana hanao zavatra be dia be sy maniry hitantana vaovao be dia be matetika dia manome ny fahatsapana fa be loatra ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy.
iTunes for Mac dia miasa tsara nefa raha miresaka momba ilay kinova ho an'ny Windows isika dia miova ny zavatra ary somary kely ihany. Ny andro hanatsaran'izy ireo azy ho mora kokoa ny asany, azo inoana fa tsy mila mampiasa an'io karazana fampiharana io isika. Androany dia hiresaka momba ny iMazing (fantatra taloha hoe DiskAid) isika, izay manamora ny fandidiana no mahatonga azy io ho fitaovana tonga lafatra hitantanana ny iDevices.
Fifanarahana miasa tsy afaka ny ho tsotra kokoa. Raha vantany vao mampifandray ny fitaovantsika isika, ny anaran'ny fitaovana dia haseho miaraka amin'ireo fizarana lehibe rehetra ahafahantsika miditra amin'ny kopia mivantana amin'ny fitaovana hafa, na manao kopia voafafa: fampiharana, rol, sary, mozika, horonan-tsary, hafatra, fifandraisana, naoty ary rafitry ny rakitra.
Amin'izany fomba izany, raha tiantsika mandika atiny eo anelanelan'ny fitaovana, azontsika atao mivantana izany amin'ny alàlan'ny fampifandraisana sy ny fitarihana ny atiny mankany amin'ny iray hafa. Mahazo aina kokoa noho ny iTunes, izay tokony hamerenanao backup aloha hamerenana amin'ny laoniny ny fitaovana vaovao, izay tafiditra ao manohy manana tsy fetezana mety hitranga manomboka amin'ny fitaovana iray mankany amin'ilay iray hafa.
IPad amin'izao fotoana izao mamporisika anay hamerina amin'ny laoniny hatrany izahay (tsy misy ny fametahana nomaniny ho solon'izay teo aloha) rehefa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny iDevice. Azontsika atao ny maka tahaka ny fampahalalana tadiavintsika: amin'ny alàlan'ny iMazing: fifandraisana, hafatra, horonan-tsary, naoty ... nefa tsy mila mamerina ny backup. Mba hanaovana izany dia mila manao kopia nomaniny ho solon'izay fotsiny isika ary hiditra izany hahazoana ny angon-drakitra izay tianay halaina amin'ny fitaovana naverina farany taminay.
2 Reel / Sary
8 Rafitra fisie
Ato amin'ity fizarana ity dia afaka manao izany isika tantano ny rindranasa rehetra fa napetraka ao amin'ny iDevices misy anay, adikao amin'ny solosainay mba hitahiry kopia nomaniny ho solon'izay na hametraka fampiharana izay notahirizinay tao amin'ny Mac na PC anay.
Reel / Sary
Mamela antsika ireo fizarana roa ireo mitahiry ary jereo ny sary sy horonan-tsary rehetra izay ananantsika amin'ny fitaovantsika ary ampitaina amin'ny Mac na PC-tsika mba hamonjy backup.
Ao anatin'ity fizarana ity dia afaka mitantana ny mozika, sarimihetsika, andian-tsarimihetsika TV, horonan-tsary, podcast, audiobooks rehetra izahay ary ampidiriko ao amin'ny iTunes U. Raha te hanampy atiny izahay mila misintona azy tsy hiala amin'ny solosaintsika fotsiny isika mandra-pahatongan'ny fampiharana.
Raha ny fahitako azy, sehatra iray naverina navoaka na eo aza ny zava-misy fa manohy manavaka azy io ny Apple, satria ity fizarana ity dia mampiseho ny atiny mitovy amin'ny amin'ny Music, fa ny horonan-tsary ihany no resahina, na sarimihetsika, andian-tsary na horonan-tsary. HO AN'NY manampy rakitra video mila misintona azy fotsiny avy eo amin'ny toerana misy azy io isika.
Mampiseho amintsika ireo hafatra rehetra izay efa nalefanay ho voarainay avy amin'ilay fitaovana. Azontsika atao ny manondrana azy ireo amin'ny PDF, amin'ny lahatsoratra tsotra efa noforonina CSV ary manondrana ireo rakitra fampitam-baovao miharo aza
Afaka avy amin'ity fizarana ity isika fanondranana ny fifandraisana rehetra aminay amin'ny endrika VCard na CSV. Izy io koa dia ahafahantsika manafatra amin'ny endrika mitovy hanavaozana ny lisitry ny fifandraisana.
Io fizarana io dia mamela antsika tantano avokoa ny naoty eo amin'ny fitaovana samihafa ananantsika, fa mampiasa iCloud tokoa izahay.
Avy amin'ny rafitra fisie azontsika atao miditra amin'ny lahatahiry lehibe ny fitaovantsika toa ny: Fampiharana, antontan-taratasy ary haino aman-jery hitantanana ny fampahalalana araka izay azontsika atao avy amin'ny faritra misy azy ireo.
Amin'ny iMazing dia tsy afaka miditra amin'ny atin'ny iDevice fotsiny isika, fa mamela antsika hiditra amin'ireo rakitra rehetra ananantsika voatahiry ao amin'ny kaontinay iCloud, afaka mamafa azy ireo, mandika izany amin'ny Mac na amin'ny fitaovana hafa ...
Ao anatin'ny backup, ho hitantsika ireo backup hafa ataontsika amin'ireo fitaovana rehetra ampifandraisintsika amin'ilay rindranasa, izay aseho ny datin'ny kopia farany, ny kinova iOS an'ny fitaovana, ny haben'ny kopia ... Avy eto no ahafahantsika miditra amin'ny atiny nomaninay ho an'ny zahao ny atiny.
Fampiharana feno hitantanana ny atin'ny fitaovanay izay azonay alaina avy amin'ny pejy ofisialy amin'ny vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iMazing: ny safidy tsara indrindra amin'ny iTunes
Nanomboka x ny vidiny 30 $ x zavatra mitovy azonao atao amin'ny iTunes maimaim-poana.
Tsy mitovy ... Lavitra izany. Izy io dia mpikaroka rakitra izay mamela anao hanangona angon-drakitra izay tsy avelan'i iTunes any aoriana.
Eny, toy ny iTools na iFunbox ary maimaim-poana ireo… ary raha mila sarany ianao dia ity iExplorer ………
Rodrigo Sánchez Rivera dia hoy izy:
Mandeha tsara i IMazing, antenaiko fa mahazo fahazoan-dàlana aho, efa nahavita ireo dingana nangatahina aho.
Valiny tamin'i Rodrigo Sánchez Rivera
skajuan dia hoy izy:
Fantatro fa lahatsoratra taloha io, mila manazava zavatra fotsiny aho, amin'ity programa ity dia azoko atao ny misafidy ny hamerina amin'ny laoniny fotsiny ireo naoty izay ao anaty backup iCloud?
Mamaly an'i skajuan
iMazing tsy haiko, inoako fa fantatro, miaraka amin'ny iExplorer azo antoka
Androany dia azo tanterahina amin'ny fanarahana ireo dingana voalaza ao amin'ity takelaka manaraka ity:
Ahoana no hamindrako sary avy amin'ny pc mankany amin'ny iphone? Tsy hitako ny safidy hanafarana fa ny manondrana fotsiny.
Ampifandraiso amin'ny fitaovana vaovao ny kaonty Cydia anao